पर्वत महोत्सव: पहिलो दिन बिजुली, दोश्रो दिन झरीले प्रभावित, आयोजक निरास ! – ebaglung.com
पर्वत महोत्सव: पहिलो दिन बिजुली, दोश्रो दिन झरीले प्रभावित, आयोजक निरास !
२०७३ माघ १४, शुक्रबार १६:२१	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ माघ १४ । पाँचौ पर्वत महोत्सवको पहिलो दिन उद्घाटनका अवसरमा प्रमुख अतिथी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन भाषण गरिरहँदा एक्कासी विद्युत प्रसारण बन्द भएर प्रभावित बनेको थियो भने दोस्रो दिन आज झरीका कारण प्रभावित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले उद्घाटन भाषण दिईरहँदा गएको बिजुली उनी राजधानी फर्किएको केहि घण्टा पछीमात्र आएको थियो । तर आज बिहानै देखी परेको झरी भरेसम्म थामिने सम्भावना देखिदैन ।
महोत्सवमा दर्शकको लागि आवश्यक पाल एवं छहारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा महोत्सव अबलोकन गर्न आएका दुई/चार जना दर्शक महोत्सव स्थल आसपासका चिया पसल, व्यक्तिका घरहरुमा ओत बस्न बाध्य भए । महोत्सवमा राखिएका विभिन्न स्टलहरु झरीले लथालिंग बनाएको छ । महोत्सव स्थल हिलाम्मे बनेको छ । स्टलहरु अवलोकन गर्नेहरुको संख्या शुन्य छ । मौसमका कारण दिउसै अँध्यारो बनेको महोत्सव स्थलमा विजुली बाल्नु पर्ने अवस्था छ ।
यहि माघ १३ देखि २२ गतेसम्म चल्ने पर्वत महोत्सवमा आज राष्ट्रिय कलकार तथा स्थानीय लोक नृत्य प्रस्तुत गर्ने आयोजकले जमर्को गरेता पनि झरीले साथ नदिएपछी उनिहरुको केहि लागेन । हरेस खाएका आयोजकहरुसंग भोलिको शुभ दिनको प्रतिक्षामा रहनु बाहेक उनिहरुसंग अर्को बिकल्प छैन ।
साताको तस्वीर: दिउँसै अँध्यारो !